musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo / Maturusi Ekugadzirisa
Karman Wiricheya Sungira Pasi Kit
PADDED RATCHET - Yakaumbwa ergonomic rabha inobata inopa yakasimba yakachengeteka kubata. Rubha yakavharwa kuburitsa trigger iri nyore kuburitsa pane inobata.
VINYL YAKADZIDZWA S HOOKS- Inopa kurwisa kwekudzivirira uye kudzivirira kukwenya mitoro uye anchor pamusoro
AKASIMBA DURABLE STRAPS- 100% Polyester
Wiricheya Tie Down Kit huwandu
SKU: TD-15 Categories: Mabhegi & Mabhegi, Mabhatiri & Chaja, Cup Vabati, Gloves, Maturusi Ekugadzirisa, Mabhandi echigaro, Wiricheya Zvishongedzo, Mawiricheya Makushoni, Wiricheya Zvishongedzo
hwiricheya Tie Down Kit inobatsira kwazvo kana iwe uchinge uri kuenda uye unoda kuchengetedza yako tsaona yakaedzwa Karman hwiricheya mune kombi, rori, bhazi kana chero mota yekufamba nayo.
Nyore kushandisa okusungisa
Zvese Hardware zvaisanganisira
Ngura yaidzivirira simbi yakaoma
hwiricheya kusunga kit
Tambo yakasimba yakasimba
1 ″ x 15 '4pcs (4 pack) ine 2 yemahara 18-yakatambanudza tambo.
4 pks / pakatoni
Takura mazana mashanu
Mutoro Kuputsa Simba 1500 lbs.
HCPCS Kodhi N / A *
Chigaro Kureba 16-22 mune zvese
Chigaro Kudzika 16 inch yepasi rose
Kune Yakazara Sarudzo Rondedzero / HCPCS KODZESE Ndokumbira utore ORDER FOMU Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo hwiricheya.
hwiricheya Sunga Down Kit UPC #
*Paunenge uchibhadharisa, ndapota tarisa nezvazvino zvazvino Nhungamiro dzePDAC pamusoro pekupedzisira kwedu hwiricheya. Ruzivo urwu haruna kuitirwa kuti rwuve, uyezve harufanire kutorwa sekubhadhara kana kuraira kwepamutemo. Vapiro vane basa rekuona makodhi akakodzera ekubhadharisa kana vachiendesa zvirevo kuchirongwa cheMedare uye vanofanirwa kubvunza gweta kana vamwe vanachipangamazano kuti vataure nezve mamwe mamiriro ezvinhu mune rumwe ruzivo.